Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ngwaahịa Pelican nke Platinum Equity ga -enweta
Platinum Equity kwupụtara taa mbinye aka nke nkwekọrịta nkwekọrịta iji nweta Ngwaahịa Pelican, onye ndu ụwa zuru ụwa ọnụ na imewe na imepụta ikpe nchedo dị elu yana akụrụngwa siri ike maka ndị ọkachamara na ndị na-anụ ọkụ n'obi n'èzí, yana usoro njikwa njikwa okpomọkụ maka ụlọ ọrụ ahụike.
Ekwupụtaghị okwu ego. A na -atụ anya na azụmaahịa a ga -agwụcha na njedebe nke anọ nke anọ nke 2021.
Pelican na-arụ ọrụ na ngalaba abụọ dị mkpa: Ngwaahịa Pelican na-echepụta ma na-arụpụta ikpe nchekwa siri ike, sistemụ ọkụ ọkụ na-ebugharị ebugharị, yana ngwaahịa ndị na-ere ahịa n'èzí maka gọọmentị na-akwụsi ike nke ukwuu, ahịa na ahịa ndị ahịa. Peli BioThermal na-enye Pọtụfoliyo zuru oke nke ihe ngwugwu na-achịkwa okpomọkụ maka ọnwụnwa ụlọ ọgwụ na-eto eto na ahịa biopharma azụmahịa.
"N'ime ihe karịrị afọ iri anọ na ise Pelican arụpụtala akara dị ike nke nwere ezigbo aha n'etiti ndị ahịa ya na-achọsi ike na ndị na-eguzosi ike n'ihe maka imepụta ụfọdụ ngwaahịa na-enweghị mbibi n'ụwa," Platinum Equity Partner Jacob Kotzubei kwuru. "Anyị na -agba mbọ iwulite ihe nketa ụlọ ọrụ bara ụba na itinye ego na ihe ọhụrụ."
N'ịbụ onye hiwere isi na Torrance, CA, Pelican na -edobe saịtị nrụpụta 12, ebe ọrụ 17 na ọdụ netwọkụ, yana ọfịs ahịa mba ụwa 23 na mba 25.
"Site na akara nrụpụta ụwa na netwọ nkesa nkesa sara mbara, Pelican bụ ọmarịcha ikpo okwu maka mmụba nke nwere ohere dị ukwuu na isi ahịa ya na ngalaba ndị dị ya nso," onye isi njikwa Platinum Matthew Louie kwuru. "Anyị na -atụ anya ka anyị na ndị otu ụlọ ọrụ na -arụkọ ọrụ ma na -ebuga ọrụ anyị na akụrụngwa M&A na -akwado usoro ọzọ nke uto na mgbasawanye nke Pelican."
Onye isi ụlọ ọrụ Pelican Phil Gyori ga -aga n'ihu na -edu ụlọ ọrụ na -eso azụmaahịa a.
Mazị Gyori kwuru, "Ka anyị na -aga n'ihu na nkwado nke Platinum Equity, enwere m ntụkwasị obi na uto Pelican ga -adịgide, ngwaahịa na ọrụ anyị ga -agbasawanye iji gboo mkpa nke ndị ahịa anyị dị iche iche." "Ana m atụ anya ịkwanye aka anyị, na -arụkọ ọrụ na ndị otu nwere ahụmịhe nke Platinum, na ịmepụta isi ọhụrụ na -atọ ụtọ na akụkọ Pelican."
Gibson Dunn & Crutcher LLP na -enye ndụmọdụ gbasara iwu yana Willkie Farr & Gallagher LLP na -enye Platinum Equity ndụmọdụ nkwụnye ụgwọ na nnweta Pelican. BofA Securities bụ onye na -ede akwụkwọ maka ego ịkwụ ụgwọ.
Ebe E Si Nweta Suisse rụrụ ọrụ dị ka onye ndụmọdụ ego naanị ya na Latham & Watkins LLP rụrụ ọrụ dị ka ndụmọdụ iwu na ngwaahịa Pelican.